Ụkpụrụ na-emepụta ihe dị arọ PDF Report - Amụma Mmasị
Home » ebook » Ezigbo ihe na-eme ka ọ bụrụ Sistem PDF Report
Anyị na-ewetara gị otu ntinye introductory pdf akụkọ maka Kyle Cooper's Fat Decimator System
Nke a FREE 46 page PDF Introductory akụkọ bụ "obere akụkụ" nke Fat Decimator System, ka ị mara ihe ndị dị na eziokwu na ihe ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta atụmatụ atụmatụ ego a.
Nbudata ibu ibu ibu amuma nke mbu http://www.fitnessrebates.com/wp-content/uploads/2018/08/FatDecimatorSystemFreeReport.pdf
AKỤKỌ ỌRỤ Fat Decimator dị na PDF ma nwee ike ile ya anya na ama ọ bụla, kọmputa, ma ọ bụ mbadamba. Ị nwere ike ịpị pịa faịlụ ahụ iji zọpụta ya na kọmputa gị.
Banyere Fat Decimator arọ Loss System:
Usoro ihe nju nke abuba bụ ihe mgbaru ọsọ ọhụụ ọhụụ ọ bụla nke na-enyere aka mee ka ahụ gị dị ọcha ma wụfu abụba ahụ na-achọghị ahụ n'ụzọ dị nchebe ma dị mma. Nchịkọta Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ihe Ọkpụkpụ Na-eme atụmatụ ka onye ọ bụla hapụ 21 lbs naanị izu 3!
Dabere na afọ 10 nke nnyocha nyochaa gbasara nchọpụta sayensị 500 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 nke nyocha ụwa, ihe nhụzi ọhụụ ọhụrụ a nke Kyle Cooper nwere rụpụta na sayensi azụghachi ya.
Kyle Cooper, onye okike nke Fat Decimator System, bụ onye bụbu mmiri na onye na-enye ọzụzụ onwe ya, Kyle na-azụ ndị agha na ndị agha iji nweta ọdịdị ha kachasị mma maka afọ 10 gara aga.
August 16, 2018 Admin ebook, Freebies Enweghị asịsa